Ungakwenza Kanjani Ukuhlola Okuphelele kwe-SEO | Martech Zone
Lwesibili, Disemba 29, 2020 Lwesibili, Disemba 29, 2020 Douglas Karr
Kuleli sonto eledlule, engisebenza naye ubeshilo ukuthi uneklayenti elibukeka liyilo unamathele ngezikhundla futhi wafuna i Ukucwaningwa kwe-SEO yesiza ukubona ukuthi ngabe kukhona yini izingqinamba.
Kuyo yonke le minyaka, izinjini zokusesha ziguquke zaze zafika lapho amathuluzi amadala wokuhlola amasayithi engasasizi ngalutho. Eqinisweni, sekuphele iminyaka engu-8 ngacasula ama-ejensi okusesha nababonisi ngokusho I-SEO ibifile. Ngenkathi i-athikili ibicindezelwa, ngimi ngasesimweni sokuqala. Izinjini zokusesha izinjini zokuziphatha ngokweqiniso, hhayi nje abakhasi abaskena ama-bits nama-byte wesayithi lakho.
Ukubonakala kwenjini yokusesha kuncike ezinhlwini ezine zokhiye:
Okuqukethwe kwakho - ukuhlela kahle kangakanani, ukwethula, nokuthuthukisa okuqukethwe kwakho futhi nokwandisa uhlelo lwakho lokuphathwa kokuqukethwe izinjini zokusesha zikhase futhi zikhombe ukuthi isayithi lakho limayelana nani.
Igunya lakho - ukuthi isizinda sakho noma ibhizinisi lakho lithuthukiswa kahle kanjani kwamanye amasayithi afanele izinjini zokusesha ezikwazi ukugaya nokubona ukuthembeka kwakho negunya lakho kusuka.
Abancintisana nabo - uzolinganiswa nokuthi umncintiswano wakho ukuvumela ukuba ukwenze, ngakho-ke ukuqonda ukuthi izimbangi zenzani ezigcina zibekwa ezingeni eliphakeme kubalulekile empumelelweni yakho.
Izivakashi zakho - imiphumela yenjini yokusesha ihambisana kakhulu nokuziphatha kwesivakashi sakho. Ngakho-ke, udinga ukuhlinzekela isu eliphelele, elihehayo ukuze kwabelwane ngalo, kukhushulwe, futhi nezivakashi ziqhubeke nokwethulwa nawe emiphumeleni yazo. Lokhu kungahle kuncike endaweni, kudivayisi, ngesikhathi sonyaka, njll. Ukwenza ngcono ukusebenza komuntu kuzoholela ekubonakaleni okukhulu kosesho.
Njengoba ukwazi ukubona, lokhu kusho ukuthi kufanele wenze ucwaningo lwethoni lokucwaningwa kwamabhuku… kusuka ekubhalweni ngekhompyutha kusayithi nokusebenza ukwenza ucwaningo lokuncintisana, ukuhlaziywa okuhamba phambili, ukurekhoda nokubukeza isimilo sezivakashi esisekhasini.
Lapho ochwepheshe abaningi bokusesha benza ucwaningo lwe-SEO, kuyaqabukela bahlanganise zonke lezi zici ekucwaningweni kwabo jikelele. Iningi likhuluma nje ngokwenza ucwaningo oluyisisekelo lwe-SEO ngezinkinga eziku-onsite.
Ukucwaningwa Kwamabhuku Kwenzeka Ngokushesha, i-SEO Akuyona
Uma ngichaza iklayenti nge-SEO, ngivame ukwabelana ngokufaniswa komkhumbi owela ulwandle. Ngenkathi umkhumbi ungaba sesimweni sokusebenza esifanele futhi uqonde ngqo endaweni, inkinga ukuthi kukhona eminye imikhumbi engahle isheshe futhi ibe ngcono… futhi amagagasi nemimoya yama-algorithms angayithanda.
Ukuhlolwa kwe-SEO kuthatha isifinyezo ngesikhathi ukukubonisa ukuthi uqhuba kanjani, wenza kanjani ngokuqhudelana nabancintisana nabo, nokuthi uqhuba kanjani maqondana nama-algorithms enjini yokusesha. Ukuze ucwaningomabhuku lusebenze, udinga ukuqhubeka ngokusebenza nokuqapha ukusebenza kwesizinda sakho… hhayi nje ukucabanga ukuthi kusethwe ngakho futhi ukukhohlwe indlela.
SE usezingeni le-Website Audit
Ithuluzi elilodwa laphaya elizokwenza lokhu kuhlolwa okusheshayo kuwe Ithuluzi lokuCwaninga amabhuku le-SE Rankings. Ithuluzi lokucwaninga eliphelele elingahlelelwa futhi likunikeze imibiko ehleliwe ukukusiza ukuthi uthuthukise futhi uthuthukise ukubonakala kwenjini yakho yokusesha kanye nezinga lakho.
The SE usezingeni Audit ihlola ibhekane nayo yonke imingcele yezinga lenjini yokusesha:
Amaphutha Ezobuchwepheshe - Qiniseka ukuthi amathegi wakho we-canonical ne-hreflang asethwe kahle, hlola izilungiselelo zokuqondisa kabusha, bese uthola amakhasi ayimpinda. Ngaphezu kwalokho, hlaziya amakhasi anamakhodi wesimo we-3xx, 4xx, ne-5xx, kanye nalawo avinjelwe i-robots.txt noma amakwe ngomaki we-noindex.
Ama-Meta Tags namaheda - Thola amakhasi anamathegi we-meta alahlekile noma ayimpinda. Ukulungiselela isihloko esifanele kanye nobude bethegi yencazelo ekugcineni kuzokuvumela ukuthi ubone amathegi amade kakhulu noma amafushane kakhulu.
Ijubane Lokulayisha Iwebhusayithi - Bheka ukuthi iwebhusayithi ilayisha ngokushesha kangakanani kumadivayisi eselula nakwezinye iziphequluli ze-Intanethi futhi, uma kuthatha isikhathi eside kakhulu, thola izincomo ze-Google zokuthi ungayisebenzisa kanjani.
Ukuhlaziya kwesithombe - Skena zonke izithombe kuwebhusayithi bese ubona ukuthi kukhona yini ezingekho kumaki we-alt noma unephutha elingu-404. Futhi, thola ukuthi ngabe kukhona izithombe ezinkulu kakhulu futhi, ngenxa yalokho, yehlisa ijubane lokulayisha lesiza.
Izixhumanisi Zangaphakathi - Thola ukuthi zingaki izixhumanisi zangaphakathi ezikhona kuwebhusayithi, imithombo yazo, namakhasi lapho uya khona, nokuthi aqukethe umaki ongalandelwanga yini noma cha. Ukwazi ukuthi izixhumanisi zangaphakathi zisatshalaliswa kanjani kusayithi lonke kuzokusiza ukuthuthuke.
Ithuluzi alivele likhase isayithi lakho, lifaka phakathi kokubili ama-analytics nedatha ye-Google Search console ekucwaningweni kwamabhuku konke ukukunikeza umbiko ocacile wesayithi lakho, ukuthi likleliswe kahle kanjani kumagama angukhiye ofisa ukulinganisa kuwo, futhi ngendlela osebenza ngayo nabancintisana nabo.
SE usezingeni ipulatifomu ibanzi futhi ivumela abanikazi bewebhusayithi ukuthi balawule zonke izici zokukhasa kanye noWhitelabel imibiko uma ungumxhumanisi we-SEO noma i-ejensi:
Imibiko ehleliwe ehleliwe kanye nokuhlolwa kabusha kukuvumela ukuthi ugcine iwebhusayithi yakho ihlolwe njalo.
I-bot ye-SE Rankings ingayishaya indiva imikhombandlela kusuka ku-robots.txt, landela izilungiselelo ze-URL, noma vele ulandele imithetho yakho yangokwezifiso.
Enza ngendlela oyifisayo umbiko wakho wokuhlolwa kwewebhusayithi: engeza i-logo, bhala imibono, bese uyayenza eyakho ngangokunokwenzeka.
Uyakwazi ukuchaza ukuthi yini okufanele iphathwe njengephutha.
Qala isilingo samahhala sezinsuku eziyi-14 se-SE Usezingeni
Landa isampula yombiko we-PDF:
I-Alexa yabelane ngale infographic, Umhlahlandlela Wokuhlolwa Kwezobuchwepheshe we-SEO Wabaqalayo, lokho kukhomba izingqinamba ezingama-21 ngezigaba eziyi-10 - konke ozokuthola kuthuluzi le-SEO Ranking Audit:
Ukudalula: Ngisebenzisa eyami I-SE usezingeni isixhumanisi sokusebenzisana kulesi sihloko.
Tags: Ukuhlolwa kwe-Alexa seoAmazonamazon alexaukuhlolwa okuncintisanaukuhlaziywa kwegama elingukhiyeithuluzi elingukhiyeukuhlolwa kwamakhasi okufikaukuhlaziywa kwejubane lekhasiukuhlolwa kwesayithi le-pdfukuhlolwa kwenjini yokuseshaukuhlolwa kwenjini yokuseshaukuhlolwa kwamanjeukuhlolwa kwamasayithi
izinsizakalo zokucwaningwa kwamawebhusayithi
UJun 28, 2015 ngo-8: 22 AM
Amathuluzi amahle wesiza solwazi. Lokhu kuyimpumelelo ikakhulukazi kwabaqalayo.